China efere na tube laser ịcha igwe Manufacturer na Supplier | Guo Hong
Efere na ịkụ eriri igwe na-ahụta ịkụcha ihe abụọ dị iche iche dị na igwe ọrụ ahụ. Ọ na - anakwere, usoro nkwụ na ntụtụ, yana usoro nchacha ọkachamara nke CNC, ọ dịkwa mfe ịrụ ọrụ ma dị mfe ilekọta. E wezụga nke ahụ siri ike nzukọ usoro ana achi achi anụ ọrụ nke CNC laser ọnwụ igwe na nnukwu nkenke. Ngwa anya eriri laser ịcha igwe na dị dị n'elu-ọkwa ngwa, nke na-enye ọrụ dị ike ọnwụ ikike na arụmọrụ. Ya mere, ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka efere akụ na ụba na nhazi ọkpọkọ.
Efere na tube laser ịcha igwe
Dual were na-eri-azọpụta
Abụọ n'ime otu nwere ike belata efere na ọkpọkọ
Igba aluminom doo
A na-arụpụta mbara igwe aerospace n'okpuru ụkpụrụ aerospace. Mgbe ịka nká na ọgwụgwọ ọgwụgwọ, ọ gwụchara. Isi ike nwere ike iru T6, ọ nwekwara njirimara nke ike na ductility.
Light ke arọ, adaba n'ihi na elu-ọsọ ije n'oge nhazi, na bụ ukwuu mgbanwe. Ọ nwere ike ịbawanye ọsọ ọsọ mgbe ezutere izi ezi.
A na-eji isi ihe dị elu mee ka isi laser dị ka teknụzụ dị elu. Ọ siri ike ma dịgide. O nwere ike nweta mmuta "ọnlaịnụ" n'oge usoro mmepụta, mmesiri ya ziri ezi ma dịkwa ọsọ.
Ejiri Akpaaka Nkwado Fractional
Ọ na-eji ọrụ ọgụgụ isi na-akwado nkwado tube, nke nwere ike idozi nsogbu nrụrụ na usoro nke ịchacha ogologo tube.
Pneumatic Chuck imewe
Designdị n'ihu na azụ azụ na-adaba adaba maka nrụnye, ịchekwa ọrụ, na enweghị akwa na akwa. Gbaa mbọ kwụsie ike nke nri na ịcha oke; Mgbanwe akpaaka nke etiti, dabara maka ọkpọkọ dị iche iche, ọsọ ọsọ dị elu, nwere ike melite nhazi arụmọrụ.
Ngwaọrụ igwe GHJG-3015 ◆ GHJG4015 ◆ GHJG4020 ◆ GHJG-4025
Mpaghara ọrụ 1500x3000mm ◆ 1500x4000mm ◆ 2000x4000mm ◆ 2500x4000mm
Max. Mgbagharị Ọsọ 70m / min
Ọsọ ọsọ 0.6G
Na ọdabara ike 1000W-6000W
1. pathzọ nkwụsi ike na ntụkwasị obi nke usoro ụzọ na usoro nchịkwa.
2. Ugboro abụọ na mgbanwe ọrụ n'elu ikpo okwu ịzọpụta na-ebugote oge na-eri.
3. Pụrụ iche na ịcha efere ọla na ọkpọkọ ọla, ịchekwa ego.
4. Nhazi ohuru maka igwe dum nwere oghere aka ekpe na aka nri maka ahihia mkpofu ahihia.
Nke gara aga: Ngwa anya Fiber Laser tingcha Machine
Osote: Tube Fiber Laser tingcha Machine
cnc laser cutter maka ire ere
cnc laser ịcha igwe emepụta
igwe cnc maka ire ere
eriri laser ịcha aluminum
laser ịcha igwe china price
laser igwe emeputa
metal mpempe akwụkwọ na anwụrụ eriri laser cutter
metal mpempe akwụkwọ ọnwụ igwe price
metal mpempe akwụkwọ laser ọnwụ aghụghọ
tube na efere laser ọnwụ igwe